Itoobiya Oo Shaaca Ka Qaaday Inay Soo Saareyso Shidaal Laga Helay Dowlad Deegaanka Soomaalida | Hangool News
Itoobiya Oo Shaaca Ka Qaaday Inay Soo Saareyso Shidaal Laga Helay Dowlad Deegaanka Soomaalida
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa sheegay in Itoobiya ay si rasmi ah u bilaabi doonto tijaabada wax soo saarka saliidda ceyriin taas oo laga helay qeybo kamid ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Hadalkan ayuu Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu kaga dhawaaqay kadib markii kulan uu la yeeshay wakiilo ka socday shirkadda Poly-GCL Petroleum Investment Limited oo ah shirkad maalgelinaysa mashruuc soo saarista saliida.
Shirkaddan ayaa la sheegay in si tijaabo ah ay usoo saari doonto 450 fuusto ama barmiil oo saliid ah maalin walba sida uu sheegay Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Dr Abi Axmed lana bilaabi doono maalinta beri ah ku beegan taariikhda 28,June.
Si kastaba ha ahaatee xukuumada cusub ee Addis-Ababa ayaa dadaal ugu jirta sidii loo soo saari lahaa saliid ceyriin oo mustaqbalka suurtagal uga dhigaysa in dalkaasi uu noqdo mid hodan ah oo ka baxa faqriga halakeeyay iyo shaqo la’aanta baahsan ee ka jirta Ethiopia.
Itoobiya waxay dhaqaale ahaan u heli doontaa 8 bilyan oo doollar sannadkiiba mar haddii ay bilawdo dhoofinta saliida, sida laga soo xigtay Abiy Ahmed Ra’iisul Wasaaraha dalkaasi Ethiopia.
Itoobiya iyo shirkada Poly-GCL Petroleum Investment Limited ayaa horey heshiisyo u kala la saxiixday sanadku markuu ahaa 2013-kii si ay u baaraan saliida laga helay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan magaalada Goday.